Bilaogera/mpanao gazety Toniziana nosamborina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 7:25 GMT
Vaovao farany: Nosazian'ny fitsarana Toniziana androany higadra herintaona an-tranomaizina ilay bilaogera sady mpanao gazety Slim Boukhdhir noho ny “herisetra tamin'ny mpiasam-panjakana”.
Nosamborina tamin'ny 26 Novambra ity bilaogera sady mpanao gazety Toniziana malaza Slim Boukhdir ity voampanga ho nanao “herisetra tamin'ny mpiasam-panjakana” sy “nanao tsinontsinona ny henatra imasom-bahoaka”. Araka ny filazan'ny Komity mpiaro ny mpanao gazety, nolavin'ny fitsarana ny famotsorana azy ary ho atao rahampitso 4 Desambra ny fotoam-pitsarana azy. Mety higadra hatramin'ny 18 volana an-tranomaizina i Slim Boukhir.
Slim Boukhdhir nandritra ny fitokonana tsy hihinan-kanina.
Nandritra ny herintaona, nanao fitokonana tsy mihinan-kanina maromaro i Boukhdhir mba hanoherana ny fanorisorenana ataon'ny governemanta sy ny fameperana ara-politika azy amin'ny zony hiala ny firenena. Tamin'ny 1 Novambra ny fitokanany tsy hihinan-kanina farany indrindra mba hanoherana ny fandàvan'ny manampahefana hanome azy pasipaoro.
Niharan'ny fanorisorenana hatrany i Slim Boukhdir, niharan'ny herisetra ary norahonan'ny polisy manao fanamiana sivily sy ireo jiolahimboto akaikin'ireo vinantolahin'ny filoha Ben Ali. Rehefa very asa amin'ny maha-mpanao gazety tao amin'ny gazety “Akhbar Al-Joumhurya” (Vaovaon'ny Repoblika) tamin'ny Aogositra 2004, nanomboka nibilaogy tao amin'ny Arabic Blog Service: Maktoob Blog i Slim Boukhdhir. Saingy tamin'ny volana Jolay 2007, voajirika sy voafafa ny bilaoginy.